Njengoba kuyoba ngeshwa kungase kuzwakale, kodwa abaningi ngokuphelele kahle namhlanje noma, kakhulu, nombono ofiphele yeka imbobo abamnyama. Futhi kukhona izinto zihambe kahle endaweni yonke pretty okuningi. Futhi anamandla kakhulu futhi emhlabeni wonke, ukuba iplanethi yethu ibe ngisho ukuphila kwethu konke, uma kulinganiswa nokwenu kubo - lutho.
imibono yesayensi wabikezela sisindvo setintfo yezinto ezikhona endaweni yonke. Akekho noyedwa kubo ayenzi okuvelayo enjalo edabukisayo, efana umgodi omnyama. Imibono mayelana imfundo yabo, essence khona ngokuvamile benziwa kudala. Ngaphambi inyatheliswe theory ka-Einstein ye kwezinto.
Kodwa muva nje siye wathola ubufakazi ngobuqotho eqinile ukuthi izimbobo omnyama endaweni yonke zikhona. Phela, ngokuvumelana imfundiso yokuziphendukela kwezinto kuba zokwakheka ezifana abasakwazi kungenzeka, kodwa eminyakeni waphikisa ngisho isibikezelo kungenzeka kwetinhlavu izinto ezinjalo.
Ngokocwaningo olwenziwa, izimbobo black libhekene adonsela phansi okukhulu kangaka eziwabambayo konke ingena imikhawulo yabo. Kodwa kukhona definition esikhethekile yini ukuhlelwa kwesikhala sezinhlamvu. Enkabeni yalo, kuba into esingavunyelwe esikhiqiza ukukhanya egoba space kanye nesikhathi.
Very interesting Kuyaphawuleka ukuthi ngisho eduze lezi zakhiwo, isikhathi sihamba kancane kakhulu. cwaningo Esanele yalezi izinto Ngeshwa engenakwenzeka. Kukhona kuphela mass nekucabangela abuye linezinto ezenzekayo esisebenzayo. Ngakho-ke, zonke izinto abachazwa abizwa ngokuthi izimbobo black, kusale lenqwaba ezingaphelele.
Kufanele kuphawulwe ukuthi iyiphi ilayisensi yokufaka okuningi inezidingo umcimbi umkhathizwe yayo - imingcele ukuthi ngeke bakwazi ukuphuma ngemva kokuwela. Ngaphezu kwalokho, into njengoba eya emgodini uqala ukunyakaza kancane kakhulu.
Sinesithakazelo ngokukhethekile yilona ingxoxo yendlela izimbobo black akhiwa. Namuhla, kucatshangwa ukuthi kunezindlela ezintathu eziyinhloko kumiswa zabo yilezi:
Ngenxa yalokho universe. Lolu hlobo izimbobo black wabonakala ngokushesha ngemuva kwe-Big Bang.
Inkanyezi befa. Ngemva inkanyezi ilahlekelwa amandla ayo - ayeke ukusabela iArmagedoni, wabangela ukuba kancane kancane ukuhlehlela. I degree of lokhu kokucindezelwa lincike ohlotsheni into: dwarfs ezimhlophe, neutron izinkanyezi izimbobo black ngokwabo.
Ngosizo ukuhlolwa. Ngokwesibonelo, e-Collider angase adale uhlobo quantum ukuhlelwa kwesikhala sezinhlamvu.
Kukhona futhi izinguqulo eziningi lokho umgodi omnyama kuyini. Ngakho, abacwaningi abaningi banomuzwa wokuthi izinto ezifana aphonswe zonke ndaba amuncwa kubo kunoma iyiphi enye indawo. Ukulandela lesi sitatimende, kumelwe kube khona owenza okuthile isimiso okuphambene imbobo "amhlophe".
Kalula nje, uma black zonke imbobo ingena, kodwa lutho ikhethwa, okumhlophe, kunalokho, akunakwenzeka ukuba uthole khona. I-agumenti eyinhloko ososayensi awashintsheki emkhathini, esinamandla futhi Ukuvutha abukhali zamandla.
Zithandwa kakhulu futhi string theory abameli ukuthi wadala imodeli ayo umgodi black, lapho ulwazi asibhubhi. Lokhu kwenza kube lula ukuphendula imibuzo eminingi ezihlobene Singularity - iphuzu emkhathini, libhekene kwabantu okungenamingcele ingcindezi.
Kodwa abaningi bayangabaza ukuthi iqiniso lokuthi Singularity izonikeza ithuba lokuhlola kahle ukuthi umgodi black, ngoba izazi zesayensi Ungasingatha izinombolo okungenamkhawulo. Ngakho-ke, nakuba beqaphela ukuthi ukhona iphuzu ngqo into, kodwa impahla ichaza okukha phezulu kakhulu.
Kusafanele ngincome ezifana ukwakheka othakazelisayo Yonke Endaweni Yonke. Phela, kuze kube manje ukuhlelwa kwesikhala sezinhlamvu - ke ingenye izinto ongaqondakali kakhulu futhi ezithakazelisayo. Ososayensi kuphela esungulwe kahle ukuthi kwenzekani ukubukeka kwabo ngenxa yokucinana sinamandla kakhulu we hydrochloric mass whereupon adonsela phansi iba sinamandla kangangokuba akuyona esikhishwe futhi ukukhanya nanoma yimiphi amasignali ngemisebe noma umzimba umsindo. Ngakho-ke, kuze kube manje ukufunda okuningi kuyajabulisa.
Yini yesazi sesayensi yamanzi lapho utadisha? Into ukutadisha Hydrology
Indlela yokusebenzisa epilator